२०७४–चुनाव – Page 167 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
काठमाडौं । संसदले निर्माण गर्नुपर्ने मौलिक अधिकारसम्बन्धि कम्तिमा १७ वटा विधेयक त्यसै बाँकी छन् । ती विधेयकमा के छ र कस्ता छन् भन्ने कुरा विधेयक पारित गर्ने संसदहरुलाई पनि थाह छैन । हरेक विधेयक कानुनका रुपमा पास हुँदा मानिनु पर्ने सार्वभौम मान्यता भनेको ‘विधायिकाको मनसाय’ हो । जव कि विधायक वा संसदहरुलाई यसका बारेमा केही […]
पत्रकार न्यौपानेमाथि गुण्डागर्दी गर्नेलाई यथाशिघ्र पक्राउ गरी कारबाही गर्न क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघको जोडदार माग
काठमाडौं । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ बाँकेका सदस्य हेमराज न्यौपानेमाथि गुण्डागर्दी गर्नेहरुको एक समूहले २०७५ भदौ २७ गते राती विनाकारण एक्कासी धारिलो हितयार प्रयोग गरी गरिएको आक्रमणप्रति आफ्नो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष ईन्द्र राउतद्वारा हस्ताक्षरित विहीवार प्रेसित एक विज्ञप्तिमार्फत् उक्त कुरा जनाइएका हो । विज्ञप्तिमा उक्त गुण्डागर्दीको घोर विरोध एवम् तीव्र […]
‘कालापानी गायब पारिएको ‘नक्शा’ र ‘निशान छाप’ नहटाउँदासम्म संघर्ष जारी’ : सीपी गजुरेल
काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल ३ नं. प्रदेशले काठमाडौंमा विहीवार दिउँसो नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका नेपालका सीमाक्षेत्र मिचेर भारतको नक्शामा पारेको विषयलाई लिएर एक विसाल प्रदर्शन सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौको सुनधाराबाट निकालिएको उक्त विसाल विरोध प्रदर्शन न्युरोड हुँदै ईन्द्रचोकमा गएर कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोण सभालाई संबोधन गर्दै देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका […]
दुखाइमाथि घुँडा धसे प्रचण्डले
काठमाडौं । ठीक एक हप्ताह अघिको सोमवार । निर्दोष साबित भएका छबिलाल पौडेल छुट्ने दिन । उनलाई लिन आफन्तहरु पुगे । बाजागाजासहित कारागार पुगेका आफन्तहरु देखेर उनी भावविह्वल भए । कारागारको छुट्ने छुटाउने प्रक्रिया सुरु भयो । उनले छुटेको भनी बेहोरा पारेको सोही मितिको कागमा सहीछाप गरे । आखिर डिल्लीबजार कारागारबाट बाहिरिए उनी । एक्कासी […]
भारतीय विस्तारवाद र ओलीको दलाल सरकारविरुद्ध देजमो ३ नं. प्रदेशद्वारा भदौ २८ गते काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरिदै
काठमाडौं । देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल ३ नम्बर प्रदेशले भारतीय विस्तारवाद र ओलीको दलाल सरकार विरुद्ध भदौ २८ गते काठमाडौंमा एक विशाल प्रदर्शन र कोणसभा गर्ने भएको छ । प्रदर्शन दिउँसो १२.० बजे सुनधाराबाट सुरुभई न्यरोड गेटहुँदै असनबाट भित्रिएर इन्द्रचोकमा पुगी कोणसभामा परिणत हुने बताइएको छ । लिम्पियाधुरा तथा कालापानी नेपालको नक्साबाट हटाई नेपालका सरकारी […]
यसरी जटिल बनाइयो निर्मलाको बलात्कार–हत्या प्रकरण
काठमाडौं । आधाशय दिनहरु बितिसक्दा पनि निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाइएका छैनन् । बरु निर्मला बलात्कार तथा हत्या छानबिन समितिका एक जना सदस्य वीरेन्द्र केसीले राजीनामा दिएका छन् । उता हत्याका मुख्य अभियुक्त भनेर प्रहरीले सार्वजनिक गरेका दिलिप सिंह बिष्ट घटनामा संलग्न नभएको आशयसहित साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् । अनुसन्धानको क्रममा निर्मलाका साथी भनिएका र […]
“मेसिनले स्वयम् प्रकृतिका शक्तिहरुमाथि मानिसको विजयको प्रतिनिधित्व गर्दछ” –कार्ल मार्क्स १) आधुनिक वैज्ञानिक–प्राविधिक क्रान्ति नवमार्क्सवादीहरुले आधुनिक वैज्ञानिक–प्राविधिक क्रान्तिले, जस्तो कि स्वचालन, कम्पुटर प्रविधिको विकास, बाह्य अन्तरिक्षमा हस्तक्षेप–प्रयास, पारमाणविक तथा अन्य वैज्ञानिक–उर्जा विकास, आदिले उत्पादन प्रक्रियामा मानिसको भूमिकालाई विस्थापित गरेको कारणबाट उत्पादनको प्रत्यक्ष कर्ताबाट अब मानिसलाई सामान्यतः प्राविधिक प्रकृयाको एउटा नियन्त्रकमा रुपान्तरित गरेको कुरामा जोडदिंदै मानव […]
सुरुहुँदै भोस्टोक महासैन्य अभ्यास
काठमाडौं । आज सेप्टेम्बर ११ देखि १५ तारेखसम्म जम्मा ५ दिन रुसको भोस्टोकमा महासैन्य अभ्यासको थालनी भएको छ । संयोगवस अमेरिकी ट्वीन टावर ढलेकै सेप्टेम्बबर ११ को दिन पारेर सुरु भएको यो अभ्यासले रुसविराधी तथा विशेष गरी अमेरिकलाई केही सैन्य सन्देश दिन खोजेको देखिएको छ । चीन र मंगोलिया समेत्को सहभागितामा हुन लागेको समाजवादी रुसको […]
क्रान्तिकारी माओवादी सुर्खेतको भेला सम्पन्न, खडानन्द लामिछानेको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय पार्टी कमिटि गठन
सुर्खेत । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सुु्र्खेतको भेला सम्पन्न भएको छ । २३ गते शनिबार सम्पन्न भेलाले खडानन्द लामिछानेको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय जिल्ला पार्टी कमिटि गठन गरेको छ । उक्त कमिटिका सदस्यहरुमा भक्त सुनार, श्याम कार्की, इन्द्रप्रसाद गौतम, गंगे कामी, चन्दा थामी, अनिल विक, गणेश सुवेदीलगायत रहेका छन् । क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली पदेशका […]